Malayshiyaad ka tirsanaa Xisbul Islaam oo ku soo biirey ciidamada dawladda Somaliya. [Akhris …] – Radio Daljir
Malayshiyaad ka tirsanaa Xisbul Islaam oo ku soo biirey ciidamada dawladda Somaliya. [Akhris …]
Beledweyn, Aug 14 – Waxaa maanta saxaafadda loo soo bandhigey tiro malayshiyaad ah oo dhan 55, hubkii ay ku hawl galo jireen iyo Taliyahoodii ku waas oo ka soo goostey ururka Xisbul Islaam iyaga oo isu soo dhiibey Malleeshiyaad taabacsan DFKMG ku waas oo gacanta ku haya magaalada Beledweyn ee xarunta gobolka Hiiraan.
Gen Mukhtaar Xirsi Cismaan oo ah Taliyaha Malleeshiyada gacanta ku haysa magaalada Beledweyn ayaa saxaafadda kula hadley madashii lagu soo bandhigey Malleeshiyada isa soo dhiibtey waxaana uu sheegey in ay dhallinyarada Soomaaliyeed ay maanta garowsadeen dantooda iyo tan umadda.
Waxaa uu sidoo kale sheegey taliyuhu in dhallintu ay noqonayaan maanta kaddib ciidan qaran, waxaana uu sheegey in ay ka bar bar dagaallamayaan ciidamada dawladda iyaha pp markii hore ka soo jeedey garka kale.
Axmed Dheere oo ahaa taliyihii Malleeshiyadii ku soo biirtey maanta Malleeshiyaadka ku sugan magaalada Beledweyn oo isna hadal jeediyey ayaa ku nuux nuuxsadey in uu aad ugu farasanyahay ka mid noqoshada Malleeshiyada taabacsan dawladda waxaana uu sheegey sidoo kale in uu aad ugu farasanyahay in dib uu ula midoobo shacabka reer Hiiraan.
Waxaa uu carrabka ku dhuftey in dawladda uu ka aaminsanaa fakir khaldan isla markaana uula shaqeyno maamulka iyo ciidamada gobolka Hiiraan.
Arrintan waxaa ay dhabar jab ku tahay kooxda Xisbul Islaam oo ahayd awalba koox aan tabar badan lahayn waxaana xilligan ay ku soo aadeysaa dhacdadani goor ay soo baxayaan warar ku andacoonaya in uu jiro iskhilaaf u dhaxeeya malleeshiyaadka Xisbul Islaam iyo Al Shabaab.